Wazi kanjani ukuthi uhlobo?
Kulesi sihloko sizozama ngobubanzi chaza ukuthi uhlobo, lapho beyohlanganyela nathi futhi lapho zilwane wehlukaniswa iziqephu. Futhi, cabanga umlando kokuzalwa eside, kuzoveza essence yayo etymological futhi ziwaqonde lapho kuyafaneleka ukusebenzisa kokubili ezifuywayo kanye kuyisayensi amacala yokufakelwa.
Ngamafuphi nje ukuthi uhlobo, sifika ekwakhiweni ezilandelayo: ingenye izinhlobonhlobo yimuphi umsebenzi kunoma iyiphi legatsha yobuciko. Izinhlobo atholakala imidwebo, izincwadi, umculo, imidlalo yaseshashalazini kanye ifilimu. Lemisebenti ingaphindze atholakala Kukhuluma, budlelwane, amasiko kanye neminye imikhakha yokuphila kwethu. Noma imiphi yale uhlobo olukhethiwe libhekene ngezici ezithile zendlela yokubhala noma icebo lapho noma yimuphi umsebenzi uhlonze kanye. Ngamafuphi nje, singasho ukuthi kuyinto stylistics abavamile. Ngo legatsha ngamunye uchwepheshe art ungakwazi ukuchaza sokusebenzisana wesitayela we umkhiqizo othize.
Uhlu emfushane izinhlobo
Ukuze zicaca, ake sicabangele umqondo ezihlukahlukene art. Ikakhulu, izinhlobo ezitholakala izincwadi, phakathi kwabo kukhona lezi:
Comedy - umsebenzi okungenangqondo ukuthi linombhalo ukuhlekisa uhlamvu.
Drama - indaba kusekelwe protagonists ingxabano.
Tale - indaba, eqokomisa eziningana izenzakalo.
Roman - ifomu ezinkulu lapho isiphetho zinhlamvu munye.
Usizi - umkhiqizo edabukisayo, nemvelo ngokuvamile ebulalayo.
Inkondlo kungaba kwanoma iyiphi incazelo, Nokho, it libhekene umlolotelo.
Lena akuyona uhlu oluphelele lwazo tetemibhalo. Ekhulwini leminyaka eledlule, esigabeni sika-amafomu etemibhalo babe ezibophayo kakhulu isiqondiso wesitayela lalilincane. Isici futhi yokuthi zonke uhlobo kungaba lula kakhulu ukubona, njengoba bonke abalobi akuvunyelwe banamathela nohlaka oluthile olumisiwe.
Izici izinhlobo wesimanje
Ngokuhamba kwesikhathi, imigoqo eyabekwa ezinjalo nezimo xaxa, landiswa, ukuze ukukhuluma, amathuba kwezobuciko ngesitayela ngamunye. Kusukela cishe ngekhulu le-19, babhali, bahlatiyi, izimbongi waqala ukuhlanganisa izindawo ezimbili noma ngaphezulu umsebenzi owodwa. Namuhla, i-main tetemibhalo eduze zithandelana kinostilistikoy, okungukuthi labo izigaba okuyizinto ezihambelana nokucinga kwakho ebhayisikobho. Lokhu kungenxa ngokuyinhloko yokuthi engxenyeni yokuqala yekhulu lama-20 izincwadi waqala ifilimi, futhi eminyakeni elandelayo lo mkhuba uye nje kuphela esiyingxenye ebalulekile yobuciko, kodwa futhi kwadingeka inkambo okuphambene izenzakalo. Okungukuthi, kwezinye izincwadi ukuthi omunye Ungathenga bese ufunda, zalotshwa iskripthi yadalelwa ibhayisikobho noma TV ewuchungechunge.
Kuyini akhicite cinema
Ngesisekelo isitayela, ezihlobene lolu hlobo lobuciko, ebiyelwe izincwadi ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Phakathi iningi movie amahlaya nosizi lwabo bahlukene, idrama, melodrama amaqhawe, umphenyi izindaba, musicals nokunye. Nokho, ngenxa ukuthuthukiswa ngokushesha cinema emhlabeni kulezi uchungechunge kukhona umthamo wemvula fair, futhi manje kungenziwa ngokuthi izinhlobo ezintathu noma ezine izikhathi ezingaphezu ezihlobene nezindlela ezihlukahlukene. Sibala ezimbalwa zalezo:
Anime - ukupenda isithombe, okuyinto eye njalo elakhiwe traffic ngamunye uhlamvu uyalingana. Ngokuqinisekile phakathi kwalezi "opopayi" kuwumsebenzi ngempela okunenjongo, ukuqonda ukuphelela okuyinto bengayi ngisho zonke omdala.
Action - bashayisana protagonist ngokuvamile nezwe zobugebengu, lapho izinkinga ziyaxazululwa ngezibhakela futhi labadubuli.
AseNtshonalanga naseMpumalanga - izinhlobo ezimbili okuphambene ukuthi kuningi enifana nge lezidlamlilo. Kuyinto isici kwenzeka kuqala esekelwe emasikweni Wild West, kanti eyesibili - ku "imiqondo" aseMpumalanga.
Ukungabaza - uhlobo ingxube eshaqisayo, umphenyi indaba futhi Thriller ukuthi akavumeli umbukeli nakancane esikrinini.
Fantasy - indaba ejwayelekile mayelana iqhawe ophelezelwa izenzakalo ngiyaphupha izinhlamvu.
isitayela Musical nesiqondiso
Ngaphandle kweqiniso lokuthi lolu hlobo ngeke miss umculo emehlweni. Le ndlela art stylistics lezizifo sizibona ikakhulukazi. Zivela ke, abantu ichaze akuthandayo zabo zomculo washintsha umculo abadlali babo, kuye ngokuthi isimo. Ekhulwini leminyaka eledlule, umsebenzi ayabiwa enjengoba enjalo izinhlobo ezahlukene, kodwa namuhla isimo okuphambene. Zonke umculo ubudala kungokwalabo zabuna njengoba isigaba enkulu. Zonke lezo imisebenzi ezalotshwa engxenyeni kwekhulu lama-20 yesibili, futhi eminyakeni yamuva nje, zihlukaniswe izinhlobo eziyinhloko, phakathi okuyizinto pop, i-jazz, blues, i-rap, i-indie, chanson, abantu umculo, izwe kanye electro. Kugcine isitayela zomculo has izinhlobonhlobo eziningi (kuma, indlu, trans, EBM, synth pop, isigubhu kanye bass, techno, Dubstep et al.).
Izinhlobo e nezinye izinhlobo zobuciko
Into enjengale uhlobo ezivamile imidwebo, ematsheni, ngisho enkulumweni yansuku zonke futhi endleleni yabantu yokuziphatha. Buka wena okushoyo - futhi wenza kanjalo uyokuqonda ukuthi leli gama kufanele kudliwe umqondo engokoqobo nengokomfanekiso kaningi ngaphezu not.
Umculi Zorikto Dorzhiev: imidwebo nemisebenzi
"Cafe Terrace at Night" Van goga. ubuthongo Khanyisa ebusuku
Udweba kanjani ibhere: Step by step imiyalelo
Dream Ukuhunyushwa: umdanso. Ukudansa ephusheni yini amaphupho?
Kuyini Deja Vu, futhi kungani okwenzekayo? Njengoba umphumela Deja Vu?
Ukulungiselela "Mucosolvan" isifuba esomile ku: imfundo manual
Izinhlobo zeplastiki, izakhiwo, izithombe
Indlela ukuqagela ngesikhathi ubuhlobo bathandile guy?
Ingcina Yamamolekhula: mshini wezenzo, ikakhulukazi, indlela yokusebenzisa
I ikhabe kuwusizo ekukhulelweni